Izinhlobo ze-Apple | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Izinhlobo ze-Apple
Izinhlobo ze-Apple: ihlobo, ekwindla, ebusika
Ngingathanda ukuthola okuthile okungokwesiko futhi okujwayelekile kunesihlahla se-apula engadini, kodwa lokhu akunakwenzeka! Futhi noma kunjalo, kusho ukuthi siyazi okuningi ngabo? Mm, mhlawumbe othile uyazi ngempela, kodwa akunakwenzeka ukuthi iningi labafundi bethu lingakwazi, ngaphandle kwemizamo eyengeziwe, ukuhlunga ukuhlukahluka kwezihlahla ze-apula ezimelelwe ezweni lakithi.
Izinzuzo kanye nokuqeda izihlahla ze-Semerenko, ukutshala nokunakekelwa
Ama-apula amnandi nama-sweet of the Semerenko ezihlukahlukene akulungele ukuvuna ngasekupheleni kukaSeptemba. Abantu abaningi bathanda ukujabulela izithelo nge-sweet apula-ukunambitheka iwayini, nakuba imvelaphi ezihlukahlukene uhlala imfihlakalo namuhla. L.P. USimirenko, umzalisi wase-Ukraine, waqala ukuchaza lokhu okuhlukahlukene futhi wabiza ngokuthi uyise.
Izinzuzo kanye nokuqeda izinhlobo ze-apula Ukutshala, ukutshala nokunakekelwa
Izinsimu ze-Apple ezweni lethu zimangale ngezinhlobonhlobo zezinhlobonhlobo. Engadini yomkhulu wami, indawo ebaluleke kunazo zonke yayiyizinto ezihlukahlukene ze-Shtriepel, omakhelwane bakubiza ngokuthi iSreyrey noma i-apple yesihlahla se-apula emigqumeni. Ekwindla, umkhulukazi wayezikhukhumeza ngamapulazi amathanga amnandi ngejusi lokufafaza, inyama enomuncu. Apple Shrifel ungowokuzalwa emazweni aseBaltic.
Sikhula isihlahla sama-apula ase-Orlik engadini yethu
Ngenxa yokunambitheka okukhulu kwezithelo kanye nezici eziphilayo ze-apple Orlik izinhlobo zihola phakathi kwabantu babo. Ngaphezu kwalokho, abalimi base-Ukraine, abaseBelarusian nabaseRussia, emazweni lapho kuhlwanyelwa khona izinhlobo zezilwane, mhloniphe ngenxa yokuvunwa okuphezulu nokunemba. Omunye umuthi ovuthiwe ukwanele ukondla umndeni, kepha uma ufuna ukuthola imali eyengeziwe, ungathola amanye ambalwa.
Indlela yokutshala nokukhula i-apula yesihlahla se-Silver Hoof ezihlukahlukene
Kunezinhlobonhlobo ezinkulu zezinhlobonhlobo zama-apula: ebusika, ehlobo, ekwindla, emuncu, enomnandi. Kulesi sihloko, sizobheka enye yezinhlobo zasehlobo ezithandwa kakhulu - isihlahla sama-apula wesiliva, izici ezihlukahlukene, imithetho yokutshala nokunakekela isihlahla. Indaba ye-apula ekhula "inselo yesiliva" Izinhlobonhlobo ze-apula "Izinselo zesiliva" zakhiwe ngo-1988 esiteshini sesilingo saseSverdlovsk umfuyi uKotov Leonid Andrianovich.
Ukutshala izihlahla ze-apula "Pear yaseMoscow" engadini yakho
I-Apple tree "Pear yaseMoscow" ibhekwa njengenye yezinhlobo ezindala kunazo zonke ezitshalwe ezikhungweni zezwe nasemasimini emadolobhana, lesi sihloko sinikelwe incazelo kanye nezimfihlo zokulima. Lokhu kuhlukahluka kubonakala ngokuzalana kwemvelo futhi akutshalwanga ngenjongo yokuhweba. Isimpawu: izinzuzo kanye nokuqeda izinhlobonhlobo. Isihlahla sinomqhele ohlanganisiwe namagatsha amakhulu, ikakhulukazi amahlamvu amancane.
Izinhlobonhlobo ze-apula ikholomu "Vasyugan": izici, ukukhiqizwa kwe-agrotechnics
Isihlahla se-Apple "Vasyugan" sibhekisela ezinhlobonhlobo zemithi ye-apula, eyaziwa kakhulu ngenxa yobumbano, ukuzala, ukuvuthwa kokuqala nokubukeka okungavamile. Futhi "i-Vasyugan", ngaphezu kwalokho, ibuye ibe nokuphakama okukhulu kweqhwa. Ake sihlolisise lezi zihlukahlukene.
Apple ezihlukahlukene "Ligol": izici, izinzuzo kanye nezimo
Izithelo ezinjenge-apula zaqala ukudliwa esikhathini esidlule. Ngisho nokhokho bethu babesazi ngezakhiwo ezizuzisayo zesithelo. Iqukethe inani elikhulu lamavithamini namaminerali okusiza umzimba ukuba unqobe izifo ezihlukahlukene futhi ugcine uhlelekile. Futhi zingaki izinhlobo zokudla kwe-apula athuthukile namuhla.